"STEMဘာသာရပ်များအကြောင်းသိကောင်းစရာနှင့် အထူးပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းများ" - Crown Education
ဒီတစ်ခါမှာတော့ မြန်မာဆယ်တန်း/iGCSEဖြေဆို အောင်မြင်ထားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ကောလိပ်တွေမှာ သင်ယူမှုအများဆုံးဘာသာရပ်ဖြစ်လာတဲ့ STEMဘာသာရပ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
Science-Technology-Engineering-Mathematicsစတဲ့ဘာသာရပ်တွေကို STEMဘာသာရပ်တွေအဖြစ်အသိများကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်ပညာရေး ရွေးချယ်တက်ရောက်တဲ့အခါ Business and Information Technology, Computer Science, Architecture, Civil Engineering, Petroleum Engineering, Aerospace Engineering, Nuclear Engineering, Software Engineeringစတဲ့ STEMဘာသာရပ်တွေကိုအများဆုံးရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။
STEMဘာသာရပ်သင်ကြားထားသူတွေအတွက် Google, Apple, eBay, Cisco, HP Inc, Intel, Facebook, Netflix, Nvidia, San Disk, Telsa Inc. Visa, Yahooစတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုများပြားနိုင်တဲ့အချက်ကြောင့် အဆိုပါဘာသာရပ်တွေကို ရွေးချယ်သင်ကြားလိုသူတွေများလာတာဖြစ်ပါတယ်။
STEMဘာသာရပ်တွေကို ရွေးချယ်တက်ရောက်တဲ့အခါ တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်အပေါ်မူတည်ပြီး တစ်နှစ်စာသင်စရိတ်အနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၅ဝဝဝကနေ ၅ဝဝဝဝအထိကုန်ကျမှုရှိပြီး CROWN Educationကတစ်ဆင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ် လျှောက်ထားသူတွေအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀မှ ၂၀၀၀၀ အထိရရှိနိုင်မယ့် အထူးပညာသင်ဆုများအပြင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
STEMဘာသာရပ်များကို အမေရိကန်တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်များတွင် ဆက်လက်သင်ကြားလိုသူ ဆယ်တန်း/iGCSEကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ပညာသင်ဆုများကို CROWN Education Yangon Office အမှတ် ၂၇၅ ၊ ၃ လွှာ ၊ ကမ္ဘောဇတာဝါ ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ✆ ဝ၁ ၅၂၇ ၈၃၈၊ ဝ၉ ၉၇၇ ၉၇၇ ၂ဝဝ သို့ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
RAI’S ENGLISH, BUSINESS AND TECHNOLOGY (EBT) ONLINE PROGRAM
Apr 07, 2020 Phone Letyar News
❑ What is RAI EBT Online PROGRAM? Royal Academic Institute ကသင်ကြားပို့ချပေးမယ့် Online EBT Program ဆိုတာ COVID-19 ကာလမှာ၊ အန္တရာယ်ကင်းကျန်းမာအောင်အိမ်မှာနေထိုင်ရင်း၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ပညာရေးနဲ့ဝေးမသွားရအောင် နောက်ဆုံးပေါ်သင်ခန်းစာတွေ၊ နောက်ဆုံးပေါ်လေ့လာသင်ကြား ရေးစနစ်တွေနဲ့ မိမိအိမ်မှာနေရင်းကွန်ပျူတာ (ဒါမှမဟုတ်) ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့လေ့လာသင်ယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ❑ ဘယ်သူတွေတက်ရောက်သင့်လဲ အသက် (၁၅)နှစ် ကနေ အသက် (၂၀)ကြား၊ ဆယ်တန်းဖြေပြီးစကလေးတွေ၊ မြန်မာအစိုးရကျောင်း ...
❑ COVID-19 ဟာတကမ္ဘာလုံးရဲ့ပညာရေးစနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်နေရာ ဘယ်လိုအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကလေးတွေဟာ ပညာရေးနဲ့အဆက်မပြတ်ရှိနေနိုင်စေဖို့ သူတို့လေ့လာသင်ယူမှုပုံစံကိုလဲပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ . ❑ ကလေးတွေအတွေနဲ့ သာမာန်စာသင်ခန်းမတွေမှာလေ့လာသင်ယူမှုတွေအပြင် virtual classroom တွေ online classroom တွေမှာလေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ . ❑ အခုလိုကျောင်းတွေပိတ်ထားချိန်မှာ၊ နိုင်ငံတကာမှာတော့သူတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို Virtual Classroom တွေကနေတဆင့်ဆက်လက်ထိတွေ့သင်ကြားပေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာပြီးသည့်တိုင် Virtual Classroom/Online Learning စနစ်တွေကို နိုင်ငံတကာမှာဆက်ပြီးသုံးသွားကြမှာဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေ အနေနဲ့ဒီစနစ်တွေ ကို ဘယ်လိုအသုံးချရမယ်ဆိုတာသိထားဖို့နဲ့လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ . ❑ Online Learning ဆိုလိုက်တာနဲ့ ...